Idozi iTunes Library Music ekpuchi
The nnọọ ihe mbụ na-amalite bụ na-emeghe gị TunesGo software. Ugboro abụọ click na software icon ugbu na PC gị na na software ga-emeghe na a homepage dị ka onye e nyere n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Music nke iTunes Library
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ tracks ugbu a na gị iTunes Ọbá akwụkwọ na n'ihi na nke a click on "Music" nhọrọ ugbu n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ na n'aka ekpe nke TunesGo page. (Nseta ihuenyo na-egosi nnọọ nhọrọ ke red igbe)
Nzọụkwụ 3. họrọ "ọcha" - "Idozi Music Ekpuchi" ọrụ
N'elu menu na TunesGo peeji nwere nhọrọ dịgasị iche iche site na nke dị mkpa ka ị pịa "Clean Up" nke ga-eme ka a na ndepụta nke wedaa menu. A na ndepụta pịa nhọrọ nke "Idozi Music ekpuchi".
A ndepụta nke songs nke music mkpuchite mkpa ka a ofu ga-egosipụta. (Nseta ihuenyo egosi 1 song nke music mkpa ekpuchi). Ugbu a pịa na nhọrọ nke "Sinụ na-ekpuchi" ugbu na n'akụkụ aka nri nke page.
Ọzọ: Hichapụ iTunes duplicated Songs